Ku saabsan Barnaamijka Mustaqbalka
Barnaamijka mustaqbalka waxaa loogu talagalay dumarka dhawaan yimid ee da’doodu u dhaxaysa 18-29 ee ku nool magaalada Stockholm ama degmada Järfälla oo doonaya inay shaqo bilaabaan. Mashruuca wuxuu higsanayaa in la xoojiyo aasaaska kooxda la beegsanayo ee suuqa shaqada iyadoo loo marayo shirar tababar iyo isku xiran la ballaariyay.
Ka qaybqaataha barnaamijka, waxaad ka qaybqaadan kartaa shan shir oo diiradda lagu saari doono aqoonta suuqa shaqada, aqoonta kombiyuutarka, shaqo raadinta, tababarka wareysiga iyo macluumaad ka ku saabsan degmooyinka. Ka qaybgalayaasha waxaa la barbar dhigi doona lataliye kulanka ugu horeeya kaas oo noqon doona taageero shaqo raadinta muddo lix bilood ah. Qof kasta oo ka qaybqaata barnaamijka mustaqbalka wuxuu noqon doonaa qayb ka mid ah shabakad fantastik ah
Sawirka waxaad ku arkeysaa lamaanaha Tua iyo Pascaline. Sawirka: Hedda Axelsson.
”Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan ka qaybqaatay lataliye ahaan, iyo wax walba oo ka sarreeya sababtoo ah waxaan bartay Pascaline! Waa wax aad u qiimo badan in la is dhaafsado waayo-aragnimada, aragtida iyo qosolka qof ka soo jeeda asal gebi ahaanba ka duwan. Runtii waxaan kula talinayaa qof walba inuu qaato fursadan.” – Tua, Mentor
Ka qaybgal barnaamijka mustaqbalka
Yaa noqon kara ka qaybgale?
Aqoonsada naag ahaan
Wuxuu u dhexeeyaa 18-29 sano
Ku noolaa Iswidhan ugu badnaan 6 sano
Waxaad rabtaa taageero si aad shaqo u hesho
Wuxuu ku nool yahay magaalada Stockholm ama degmada Järfälla
Waxaa lagaa filayaa inaad:
Ka qaybgal shanta shir
La kulan lataliyahaaga lix jeer lix bilood gudahood
U fiirso inaad balamaha la qabsato hagahaaga
Ka jawaab sms / email casumaadaha Nya Kompisbyrån
Yaa noqon kara lataliye?
Waa ugu yaraan 18 jir
Ku leeyahay nooc ka mid ah khibrad shaqo gudaha Iswiidhan
Wuxuu ku nool yahay gobolka Stockholm (faa’iidada haddii aad ku nooshahay meel u dhow magaalada Stockholm ama degmada Järfälla)
La kulan lamaanayaal ahaan ugu yaraan bishii hal mar muddo lix bilood ah
Ka qaybgal shirka bilowga
Nala soo xiriir haddii aad wax su’aalo ah qabtid
Hoos iska diiwaan geli!
Tan waa sida ay u shaqeyso
Diiwaan Geli xiisahaaga barnaamijka mustaqbalka adiga oo riixaya ka qaybgalayaasha ama la-taliyeyaal. Kadibna buuxi foomka. Waxaad heli doontaa iimayl markaan helno codsigaaga.
Waanu kula soo xidhiidh doonaa muddo bil ka dib,kadibna waan soo wici doonaa oo aan kuu sheego doonaa wax badan oo ku saabsan barnaamijka mustaqbalka oo aan ku waydiin doono su’aalo kale oo dheeraad ah si aan u suurtagelino kulanka ugu fiican.
Waxaan isbarbar dhigi doonaa kaqeybgalayaasha iyo lataliyeyaal ku saleysan danaha, rabitaannada, da’da, khibradda shaqada iyo yoolalka. Waxaad heli doontaa iimayl iyo fariin qoraal ah haddii aan helnay ciyaar wanaagsan.
Lammaane kasta oo isbarbar-dhigaa waxa lagu martiqaadi doonaa kulan bilow ah oo aad ku kulmi doontaan markii ugu horreysay. Inta kulanka uu socdo, Nya Kompisbyrån waxa ay ku siin doontaa macluumaad, talooyin iyo tilmaamo. Si wada jir ah waxaad u dejisanaysaan yoolal latalinta oo aad go’aansataan goorta la idin arkayo mar labaad. Adiga ka qaybgale ahaan waxa aad masuul ka tihiin inaad wada shirtaan ugu yaraan lix jeer muddo lix bilood ah. Kompisbyrån cusub wuxuu diyaar u yahay sidii loox taageero iyo dhawaaq ah inta lagu jiro barbaarinta oo dhan.
Toddobaadka ka dambeeya kulanka bilowga ah, dhammaan ka qaybgalayaasha (ma aha hagayaasha) waxaa loo oggolaan doonaa inay aadaan afar kulan oo tababar Talaado-Jimce ah 2 saacadood / maalintii. Inta uu kulanku socdo waxa aad baran doontaa sida loo codsado shaqo, tababar waraysi, xirfada kombiyuutarka, waxa ay degmada du ku siin karto taageero iyo wax badan oo kale.
Inta lagu jiro xilliga dayrta ee 2022, dhammaan lamaanayaasha la-talinta waxaa lagu martiqaadi doonaa seddex kulan oo shabakadeed / kullamo xiritaanka halkaas oo aan ku heli doonno fursad aan ku is dhaafsanno fikrado wanaagsan oo aan ku baranno dad badan oo qayb ka ah barnaamijka mustaqbalka. Dhammaan lamaanayaasha la-talinta ee kulmay lix jeer lix bilood gudahood mid kastaa wuxuu heli doonaa shahaado inta lagu jiro kulannadan midkood. Waxa kale oo aanu rajaynaynaa in idinka oo lamaanayaal ah aad rabi doontaan in aad xidhiidh sii wadataan barnaamijka mustaqbalka ka dib.
Haddii aad wax su’aalo ah qabtid, si diiran ayaa laguugu soo dhaweynayaa inaad la xiriirto:
Hogaamiyaha mashruuca: Matilda Hardmeier
FBarnaamijka mustaqbalka waxa lagu fulin doonaa kulamo jireed, laakiin dabcan waxaanu raacnaa talooyinka Hay’adda caafimaadka dadwaynaha, shirarka qaarkoodna waxa lagu qaban karaa qaab dijital ah. Waxaad heli doontaa macluumaad dheeraad ah haddii aad boos hesho, ama ugu dambayn bilowga ka hor.
Barnaamijka mustaqbalka waa mashruuc ay leedahay magaalada Stockholm oo kaashanaysa Nya Kompisbyrån. Mashruucan waxaa sidoo kale iska kaashaday degmada Järfälla, waxaana maalgeliya maamulka gobolka Stockholm.